Baro sida loogu qurxiyo qolka fadhiga dhirta | Bezzia
Susana Garcia | 05/04/2021 20:00 | Qalabka guriga, Qurxinta
Dhirtu maaha noolaha kaliya ee inaga caawiya abuuritaanka goob caafimaad iyo mid gaar ah, laakiin sidoo kale waxay qayb ka yihiin qurxinta. Gudaha qolal badan oo guriga ka mid ah waxaan dhigi karnaa dhir, gaar ahaan haddii aynaan lahayn dabaq ama beer aan ku dhex yeelanno. Waa fikrad aad u fiican in lagu daro midab dhir leh si qolka fadhiga looga dhigo mid soo dhaweyn badan leh.
ka dhirta qurxinta aagga qolka fadhiga waxaa lagu ridi karaa meelo badan. Waa muhiim in la ogaado halka la dhigayo si aysan u carqaladeyn oo ay u qurxiyaan. Haddii aad ku dareyso dhir qaar ka mid ah gurigaaga, haka laba labayn inaad qolkaaga fadhiga qaar dhigto si boosku u noqdo mid raaxo leh oo qurux badan isla mar ahaantaana.
1 Sida loo daryeelo dhirta qolka fadhiga
2 Kudar ku dar qolka fadhiga
3 Abuur geeska geedka
4 Dhirta dambiisha dhogorta leh
5 Dhirta sudhan qolka fadhiga
Sida loo daryeelo dhirta qolka fadhiga
La qolka fadhiga waa meel caadi ah oo saacado badan lagu qaato. Taasi waa sababta ay ku saabsan tahay abuuritaanka aag aad u raaxo leh oo lagu raaxeysto. Dhirtu waxay naga caawinaysaa inaan hagaajino diirimaadka meel kasta. Si aan ula qabsano waa inaan ogaanno nooca dhirta ay tahay iyo daryeelka ay u baahan tahay. Maaddaama ay tahay inaannu xoqno, intee in le'eg ayaannu waraabinaynaa ama haddii ay u baahan yihiin iftiin toos ah iyo in kale. Sidoo kale waa muhiim inaan doorano dhirta gudaha, haddii kale ma awoodi doonaan inay ku noolaadaan gudaha.
Kudar ku dar qolka fadhiga
ka cacti aagga qolka fadhiga waa fikrad aad u fiicanIn kasta oo haddii ay weyn tahay, waa in laga taxaddaraa si aan xoolaha ama carruurta waxyeello uga soo gaadhin. Cacti-gaani wuxuu ku habboon yahay dhammaan noocyada bey'adeed. Qolalka fadhiga waxay ku abuuraan meelo shakhsiyad badan leh. Qurxinta boho, qaabka Nordic ama qaabka Californian ayaa ku habboon in lagu kabo adeegsiga cacti, gaar ahaan haddii ay waaweyn yihiin. Kactusku uma baahna daryeel badan, maxaa yeelay waa inay heystaan ​​biyo yar oo aan la goynin ama wax la mid ah, sidaa darteed haddii aan ku cusub nahay daryeelka dhirta waa fikradda ugu fiican.
Abuur geeska geedka
Hadaad sida qaabka caadiga ah ee dhirta, fikrad weyn ayaa ah in lagu daro gees geedo leh. Isticmaal labis ama xitaa buug-gacmeed si aad dhirta ugu dhigto heerar kala duwan. Waxaad ku dari kartaa aag aad iftiin fiican ku leedahay, daaqada agteeda. Geesaha geedaha ayaa kufiican guri kasta waxayna sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan si fudud u daryeelno. Waxaad adeegsan kartaa gabal gabal gabal gaboobay, maxaa yeelay habkaas wuxuu yeelan doonaa xitaa soo jiidasho badan. Haddii aad dhigto dhowr dhir geeska ah, waad isku qasmi kartaa, adigoo dooranaya qaar ka duwan, abuurista halabuur qurux badan.
Dhirta dambiisha dhogorta leh
Dambiilo Wicker ah ayaa aad u caan baxay maxaa yeelay waa qalabka dabiiciga ah ee guriga ku daraya taabasho diiran. Taasi waa sababta munaasabado badan loo adeegsado in lagu daboolo dheriyada oo la siiyo taabasho gaar ah. Haddii aad iibsaneyso dhir aad u waaweyn, waxaad u isticmaali kartaa dambiil noocan ah aagga qolka fadhiga. Qaarkood waxay leeyihiin boombolo ama waa la rinjiyeeyay sidaa darteed waxay ku habboon yihiin in lagu qurxiyo dhirta.
Dhirta sudhan qolka fadhiga
Hab kale oo dhir loogu rido qolka fadhiga waxaa ku yaal dhir deldeshay. Waxaa jira qaybo jeexjeex ah oo lagu daldalo oo waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan, in kastoo ay u baahan yihiin xoogaa shaqo ah maxaa yeelay waa inaad dhejisid oo aad weliba rakibtaa dheriyo, oo aan aad u weynaan karin. Dheryaha noocan ah waxaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro meelaha bannaan ama lagu qurxiyo derbiyada iyo saqafka. Waa fikrad aad u fiican oo naga caawinaysa inaan u isticmaalno dhirta meelo badan oo qolka ah oo aan uga dhigno kuwo qurxin leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Sida loogu qurxiyo qolka fadhiga dhirta